किन मन्दिरमै कुँदियो यौन आसनका आकृति ? - Safalnews
सफल न्युज द्वारा २०७७ आश्विन २१ गते बुधबार १५:४० मा प्रकाशित
33 FacebookTwitterWhatsAppViberTelegramFacebook Messenger
यौनका विषयमा कुरा गर्दा अझैपनि नेपाली समाज खुम्चन्छन् । यौनलाई ‘छाडा’ मानिन्छ । त्यही कारण धेरैजसोले यौनका विषयमा जाग्ने जिज्ञासा, यौन इच्छालाई भित्रभित्रै दबाएर बस्छन् । यौनको प्रसंग कोट्याउनसाथ रातोपिरो हुन्छन् ।
भनिन्छ, यौनप्रतिको गलत धारणा र बुझाईले आज दम्पतीको सयन कक्षबाट कलह पैदा भएको छ । यौन कुष्ठा र आवेगको भयावह नतिजा बलात्कार, यौन हिंसाको रुपमा प्रकट हुँदैछ । जबकि संयमित, सिर्जजनात्मक यौनका समबन्धमा हाम्रा पिता–पूर्खाले सदियौंदेखि अनेक अभ्यास गर्दै आए, जसले यौनका आयम र महत्वलाई अरु गहिराइमा बुझ्न सकियोस् । त्यही अभ्यास थियो, मन्दिरको टुँडालम कुँदिएका थरीथरीका यौन आसन ।
ललितपुर पाटन दरबार क्षेत्रको चार नारायण, हनुमान ढोका दरबारको विश्वनाथ, भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर जस्ता मन्दिरमा जाँदा मूल मन्दिरको ढोका माथिको चारै तर्फ हेर्नुहोस् अनेकन यौन आसन देख्नुहुनेछ ।
हामी खुल्ला रुपमा यौन गतिविधि गर्नुलाई नै आधुनिक सम्झने गर्छाैं । विभिन्न अभिलेखका अध्ययनहरु एवं यस्ता कलाकृतिहरुले प्राचीन नेपाली समाज पनि सभ्य थियो । तर, यौन जीवनको हिसाबले शिक्षित समेत थियो भन्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले त ती टुँडालहरुमा उल्लेख भएका कलाकृतिले के संकेत गर्ने गरेका छन् ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यहाँ देखिएका यौन आसनका आकृतिहरु ज्ञानको लागि हुन् या अरु नै प्रयोजनका लागि ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, यसलाई वात्सायनको कामसूत्रसँग दाँजेर हेर्ने हो भने यी टुँडालहरुमा कुँदिएका आकृति यही कामसूत्रले उल्लेख गरेको यौनासनहरु थिए भन्न सकिन्छ ।